SONATA-CANTATA: Abhidhamma Books In English
အခုတလော အဘိဓမ္မာအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း စာအုပ်တွေ လိုက်ရှာနေတာ အတော်ပဲ။ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ စာအုပ်တော့ ၀ယ်ထားခဲ့တာရှိတယ်။
ဒါက တော့ pdf ပါ။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကို အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း လိုချင်ပါတယ်။
Mahāthera Nadara = မဟာထေရ နဒရ
ဘယ်စာအုပ်စဖတ်ရမှန်းမသိ။ ရသလောက် အကုန်ယူသွားတယ်။ Ven. Nyanaponika Thera ရဲ့စာအုပ်ညွှန်းပုံလေးသဘောကျလို့ သူ့ကိုအရင်ဖတ်ဖြစ်မိမယ်ထင်တယ်။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pandora >>> ကျေးဇူးပါ...။ တစ်စုတည်း ဖြစ်သွားအောင် ဆရာ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ စာအုပ်ကို ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က သင်္ဂြိုဟ် အခန်း-၈ ပစ္စယသင်္ဂဟပိုင်းမှာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း ပါပါတယ်။ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာ ပညာဘူမိကဏ္ဍမှာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းဒေသနာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အကျယ်ရှင်း ထားပါတယ်။ ဘိက္ခုဉာဏမောဠိရဲ့ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အင်္ဂလိပ်မူကို pdf version မတွေ့မိသေးပါဘူး။
ဆရာကြီး ဦးသံဒိုင်ပြန်ရေးထားတဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အင်္ဂလိပ်မူကတော့ ဒီမှာပါ။ http://www.usamyanmar.net/Buddha/Book/THE%20DOCTRINE%20OF%20PATICCASAMUPPADA.pdf
Craton >>> ကျေးဇူးပါဘဲ၊ အမည်မှန် Nārada လို့ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။ Ven. Nyanaponika Thera ရဲ့စာအုပ်ပေါ် အဓိက အခြေခံပြီး “သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာ”, “အဘိဓမ္မာနှင့် ဓမ္မာ” တို့ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရတာ အားမသန်လို့ ယူမသွားတော့ဘူး အကိုဧရာ၊ စိတ်ဝင်စားသူရှိရင် ညွှန်းလိုက်ပါ့မယ်။ ၄ပိုင်းထဲက စိတ် စေတသိက် ရုပ်အထိ ဆရာလေးဆီမှာ လေ့လာခဲ့ပြီး နိဗ္ဗာန် အပိုင်းတပိုင်း ကျန်နေတယ်။ တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျင့် အဘိဓမ္မာကိုတော့ သိတ်ကြိုက်တယ်။ ကြိုးစား လိုက်နာ ကျင့်သုံးတယ်။ ကျေးဇူးပါ အကိုဧရာ...
အကုန်ယူထား လိုက်တယ်။ တတ်နိုင်သမျှ သာသနာပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့။ (တော်တော်ကြီးကျယ်သွားပြီ၊ မေးလာခဲ့ရင် ပေးနိုင်အောင်လို့ပါ)။ :)